တရုတ်နိုင်ငံ၏ လူလိုက်ပါအာကာသယာဉ် က အာကာသစခန်းနှင့် လျင်မြန်စွာ အလိုအလျောက် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ပြီးစီး - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက ဂြိုဟ်တုသစ်ငါးလုံး လွှတ်တင်
တရုတ်နိုင်ငံ ၏ အရေးပါသည့် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစတင်ထုတ်လွှတ် ၊ သမ္မတ က ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာပေးပို့ ၊ ဝန်ကြီးချုပ်က ညွှန်ကြားချက်ပြုလုပ်၍ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် က အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့
ပေကျင်း အာကာသ ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်မှုစင်တာ မှ ဇွန် ၁၇ ရက်၌ ရိုက်ကူးထားသည့် “Shenzhou-12” လူလိုက်ပါသည့် အာကာသယာဉ် နှင့် “Tianhe core module” အလိုအလျောက် လျင်မြန်စွာ ချိတ်ဆက်နေသည့် မြင်ကွင်း (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဇွန် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ လူလိုက်ပါသည့် အာကာသယာဉ် အင်ဂျင်နီယာရုံး (China Manned Space Engineering Office) ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ “Shenzhou-12” လူလိုက်ပါအာကာသယာဉ်သည် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် အဆင်ပြေစွာ အခြေအနေ ချိန်ညှိမှုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၁၇ ရက် ပေကျင်း ဒေသစံတော်ချိန် ၁၅ နာရီ ၅၄ မိနစ်တွင် အလိုအလျှောက်လျင်မြန်စွာချိတ်ဆက်သည့် ပုံစံဖြင့် “Tianhe core module” အရှေ့ဘက်အစွန်းနှင့် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပေကျင်း အာကာသ ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်မှုစင်တာ မှ ဇွန် ၁၇ ရက်၌ ရိုက်ကူးထားသည့် “Shenzhou-12” နှင့် “Tianhe core module” ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် ယခင်ချိတ်ဆက်ထားသည့် Tianzhou-2 နှင့် module ၃ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အာကာသစခန်းအား မြင်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း အာကာသ ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်မှုစင်တာ တွင် ဇွန် ၁၇ ရက်၌ သိပ္ပံပညာရှင်များက “Shenzhou-12” နှင့် “Tianhe core module” အလိုအလျောက် လျင်မြန်စွာ ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ ကို တိုင်းတာနေကြစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း အာကာသ ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်မှုစင်တာ မှ ဇွန် ၁၇ ရက်၌ ရိုက်ကူးထားသည့် “Shenzhou-12” လူလိုက်ပါသည့် အာကာသယာဉ် နှင့် “Tianhe core module” အလိုအလျောက် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်မြင်ကွင်း (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း အာကာသ ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်မှုစင်တာ မှ ဇွန် ၁၇ ရက်၌ ရိုက်ကူးထားသည့် “Shenzhou-12” အာကာသယာဉ် နှင့် “Tianhe core module” ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက် module ၃ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အာကာသစခန်းအား မြင်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း အာကာသ ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်မှုစင်တာ မှ ဇွန် ၁၇ ရက်၌ ရိုက်ကူးထားသည့် “Shenzhou-12” လူလိုက်ပါသည့် အာကာသယာဉ် နှင့် “Tianhe core module” အလိုအလျောက် လျင်မြန်အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက် မြင်ကွင်း(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း အာကာသ ညွှန်ကြားထိန်းချုပ်မှုစင်တာ မှ ဇွန် ၁၇ ရက်၌ ရိုက်ကူးထားသည့် “Shenzhou-12” လူလိုက်ပါသည့် အာကာသယာဉ် နှင့် “Tianhe core module” လျင်မြန်စွာ ချိတ်ဆက်နေသည့် မြင်ကွင်း (ဆင်ဟွာ)
ယခင်ချိတ်ဆက်ပြီးစီးထားသည့် Tianzhou-2 ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး အာကသယာဉ် နှင့် အတူတကွ ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ကာ module ၃ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အာကာသစခန်းကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ချိတ်ဆက်မှုအလုံးစုံပြီးစီးရန် အချိန်အားဖြင့် ၆.၅ နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းမှာ “Tianhe core module” အာကာသ ယာဥ် လွတ်တင်ခဲ့ပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ် လူလိုက်ပါလာသည့် အာကာသယာဉ် နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များအရ အာကာသယာဉ်မှူး ၃ ဦးအနေဖြင့် “Shenzhou-12” အာကာသယာဉ် မှ တစ်ဆင့် core module အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
3. 这是6月17日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十二号载人飞船与天和核心舱自主快速交会对接画面。新华社记者 金立旺 摄
4. 6月17日，在北京航天飞行控制中心，科研人员在监测神舟十二号载人飞船与天和核心舱自主快速交会对接情况。新华社记者 金立旺 摄
5. 这是6月17日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十二号载人飞船与天和核心舱自主快速交会对接成功的画面，与此前已对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱（船）组合体。新华社记者 金立旺 摄
6. 这是6月17日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十二号载人飞船与天和核心舱自主快速交会对接成功的画面，与此前已对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱（船）组合体。新华社记者 金立旺 摄
7. 这是6月17日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十二号载人飞船与天和核心舱自主快速交会对接成功的画面。新华社记者 金立旺 摄
8. 6月17日，在北京航天飞行控制中心，工作人员在拍摄神舟十二号载人飞船与天和核心舱自主快速交会对接画面。新华社记者 金立旺 摄